Recalbox 18.06.27 ikozvino yawanikwa nekutamba pamhepo | Linux Vakapindwa muropa
La vhezheni nyowani yeRecalbox yave kuwanikwa kuti itorwe kana kuvandudzwa kana iwe uri kushandisa ino system pakombuta yako kana Raspberry Pi. Zvakanaka, kuburikidza neshoko vagadziri veRecalbox yakazivisa kuwanikwa kweshanduro iyi nyowani pamwe neayo matsva maficha uye kugadzirisa bug.
Mune izvi vhezheni itsva yeRecalbox 18.06.27 inosimbisa kuiswa kwechinhu chitsva umo vashanduri vehurongwa vakashanda zvakanyanya kuti vakwanise kutakura kune system. Iri basa nyowani rinodaidzwa kuti NetPlay.
1 Nezve NetPlay muRecalbox 18.06.27
2 Nezve iyo nyowani vhezheni yeRecalbox 18.06.27
3 Dhawunirodha Recalbox 18.06.27
Nezve NetPlay muRecalbox 18.06.27
Iri basa nyowani ratingawana mune iyi nyowani vhezheni yeRecalbox 18.06.27 Izvo zvichatibvumidza isu kunakidzwa nemitambo yemhando dzakasiyana dze retro mazita online kupikisana nemumwe mutambi ane zvakare basa iri.
Chaizvoizvo izvo zvinotibvumidza isu kuti tiite iri basa nyowani iko kugona kutamba mitambo yepamhepo uye kuwana budiriro kubva kumamwe emazita anotsigirwa neiri basa, sekunge yaive yazvino vhidhiyo yemitambo inonyaradza.
net play kwete chete inogona kunakidzwa nevashandisi veRecalbox 18.06.27 kana zvisiri izvo zvakare avo vane iyo yakagadziridzwa vhezheni yeRetroarch iyo zvakare inoita kushandisa kweiri basa.
Iyi NetPlay basa inogona kumisikidzwa kubva "Menyu> Zvirongwa zveMitambo> Zvimiro zveNetplay", umo matinogona kupa zita rekushandisa, chiteshi chauchashandisa kubatanidza.
Zvakare zvinosanganisirwa muiri interface ndeye mukana wekukwanisa kuwana ruzivo runotevera kana uchinge wakabatana, mukati medu tichakwanisa kuziva kana paine chero emitambo yetroo yemitambo yatinayo inoenderana kana kwete yemutambo wepamhepo.
Ruzivo rwatinogona kuwana nderekuti:
Username (ine diki icon kana iri mutambo wakatangwa kubva kuRecalbox)
Hash match (kana iwe uine iyo yakafanana ROM ine iyo yakafanana hashi mumitambo yako)
Kubatanidza latency uye rumwe ruzivo
Mune mhedzisiro iyi ruzivo runoratidzwa kana zvichikwanisika kupinda kana kugadzira mutambo wepamhepo zvichienderana nemirau inotevera:
Girinhi: iwe une iyo yakanaka ROM ine yakanaka hashing, iyo kernel yakanaka, mikana yakakwira kuti ichashanda
Bhuruu: hash haifanane (asi mamwe maROM haana hashi, semuenzaniso Arcade ROMS), asi iyo faira iri pane yako system uye kernel yakanaka kuti igone kuridzwa online.
Tsvuku - hapana faira yawanikwa, isingabvumirwe sisitimu, hapana wepakati mutambo - hapana mukana wekuti ishande (mutambo hauzotanga).
Nezve iyo nyowani vhezheni yeRecalbox 18.06.27
Pindai izvo zvimwe zvinhu uye zvigadziriso zvebug zvatinogona kuratidza mune iyi vhezheni itsva yeRecalbox 18.06.27 yatinowana iko kugadzirisa kweiyo yakazara skrini mode kana uchishandisa iyo N64 emulator mupen64plus.
Nekuvandudza izvi dambudziko raive nemumiriri aine mamwe magadziriso escreen rinobviswa, sezvo zvisati zvaitika resolution yescreen yaifanirwa kumanikidzwa kudzivirira zvikanganiso zve odhiyo.
Asi neiyi gadziriso, yakazara skrini mode ikozvino inogoneka.
Nezve izvo zvitsva maficha meseji yekuyambira iyo inotangwa kana uchiita odhiyo yekuvhara iyo system inogona kusimbiswa.
Nezvo izvi, zvinotiyeuchidza kuti isu tinofanirwa kuchengetedza data redu uye nekudaro tirege kurasikirwa navo kana tichiita nekukurumidza kudzima kwechirongwa.
Iyi vhezheni itsva ye Recalbox yakagadziridzwa kune iyo nyowani vhezheni ye libretro-o2em.
Uye nezve maitiro akawedzera chiziviso chitsva cheEASports kuhurongwa, pamwe neyakareba nguva yekuvhara screen mu recalbox.conf mairi isu tinogona kumisikidza iyo nguva yekutamba mavhidhiyo anopenya.
Dhawunirodha Recalbox 18.06.27
Shanduro itsva ye Recalbox 18.06.27 yave kuwanikwa kurodha pasi kubva muchikamu chayo chekurodha pasi chaunogona kuwana kubva pane inotevera chinongedzo. Pano unogona kusarudza kuti ndeipi vhezheni yeRecalbox iwe yaunoda kurodha pasi kana iri yeRaspberry Pi, Odroid kana yePC.
Kana iwe uri Raspberry Pi 3 B + mushandisi, Recalbox haienderane nemudziyo parizvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Recalbox 18.06.27 ikozvino yawanikwa nekutamba pamhepo
Zvinoshamisa zviri kuitwa nerebhokisi, ini ndichangotenga rasipibheri pie 3 b + bhodhi uye haienderane, ndinoshuvira kuti igone kushandiswa, sezvo ndakatengesa bhodhi rangu rekare, zvino yave nguva yekumirira, ini Ndiri kutarisa zuva rose kuti zvimwe chimwe chinhu chibude.